အဆိုပါ PC ကိုပေါ်နှင့်မသာကြောင်း PLAY မှာအဟောင်းဂိမ်းတစ်ခုရွေးချယ်ရေးနေဆဲဖြစ်ပါသည် - ဂိမ်းပြဿနာများ - 2019
ငလျင် III ကို Arena
Duty of2ခေါ်ရန်
max ကို Payne
မာရျနတျမေလ Cry 3
စေ၏သူရဲကောင်းများနှင့်မှော် III ကို
အခန်းက္ပပါတီဂိမ်းများကိုတစ်ခေတ်ဆန်းကြုံနေရနေကြတယ်, သူတို့၏ "ရွှေအသက်အရွယ်က" ကိုးဆယ်နှင့်သုည၏ဇာတ်သိမ်း၏အစဦး၌လာ၏။ ထိုအခါဤစီမံကိန်းဟာရှုထောင့်ဒိုင်းနမစ်, စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် Non-linear storyline နဲ့ဇာတ်ကောင်အတန်းနှင့်၎င်းတို့၏စွမ်းရည်ပေါင်းစပ်နိုင်စွမ်းနှေးကွေးမှအရည်အသွေးမြင့်သေနတ်သမား, ဒါပေမယ့်လည်းထင်ထွက်နည်းဗျူဟာသာလုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်သောလောကဓာတ်ကိုပြသထားသည်။
Baldur ရဲ့ဂိတ်စတူဒီယို BioWare ကဒီဇိုင်းနှင့် 1998 ခုနှစ်တွင်ဆက်စပ်မှုတွေများကဖြန့်ချိခဲ့သည်
Kingmaker: ဒါဟာ Baldur ရဲ့ဂိတ် Tyrania အပါအဝင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အချိန်လူကြိုက်များဂိမ်းများ, များစွာသော developer များ, ထာဝရနှင့် Pathfinder ၏တိုင်မှုတ်သွင်းသည်။
2012 ခုနှစ်တွင် BioWare ၏တည်ထောင်သူတိုးတက်လာသော mechanics ရဲ့, ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနှင့်အသစ်ဂိမ်းပလက်ဖောင်းထောက်ခံမှုနှင့်အတူပြန်လည်ထုတ်ပေးပါဖြန့်ချိခဲ့သည်။ နောက်တဖန်တစ်ဦးကိုမှန်ကန်ဂန္သို့ထိုးဖို့ Excellent ကအခွင့်အလမ်း။
1999 ခုနှစ်တွင်ကမ္ဘာ့အဆိုက်ဘာရူးငလျင် III ကို Arena ဂိမ်းပုံစံဖမ်းသည်။ ပိုပြီးပစ်ခတ်မှု၏ mechanics ရဲ့ခမ်းနားလေ့လာမှု, တိုက်ပွဲ၏မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ဒိုင်းနမစ်, spawn အချိန်ကိုက်ဂီယာနဲ့လာရန်အများအပြားဆယ်စုနှစ်အဘို့ဤအွန်လိုင်းသေနတ်သမားစံပြပါစေ။
ငလျင် III ကို Arena နေဆဲအများအပြား oldfagi ကုန်တယ်သောစုံလငျခွငျး multiplayer ဂိမ်းခဲ့သည်
Duty စီးရီးခေါ်ရန်ဂရပ်ဖစ်များနှင့်ဂိမ်း၏စည်းကမ်းချက်များ၌တစ်ဦးချင်းစီကတခြားကနေအများကြီးကွဲပြားခြားနားသောမဟုတ်သည့်ပိုပိုပြီးသစ်ကိုစိတျအပိုငျး, ထုတ်, နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းအဆိုပါပေါ်ကိုပေါ်ရပ်နေကြ၏။ သူကဒုတိယကမ္ဘာစစ်အကြောင်းကိုဂိမ်းနှင့်အတူစီးရီးစတင်ခဲ့ပြီးနှင့် shooters တကယ်စောက်ခဲ့ကြသည်။ ဒုတိယအစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်ဖြစ်သောကြောင့်ကျနော်တို့စီးရီးများနှင့်ဂိမ်းစက်မှုလုပ်ငန်း၏သမိုင်းအတွက်မမြင်ရတစ်ဦးပြိုယွင်းဆိုဗီယက် Stalingrad အတွက်မဲဆွယ်စည်းရုံးရေး၏မော်ကွန်းက start ၏များစွာသောပြည်တွင်းကစားသမားများကကိုအောကျမေ့နေသည်။
Duty of2ခေါ်ရန် 2005 ခုနှစ် Infinity ရပ်ကွက်နှင့် Pi စတူဒီယိုကတီထွင်ခဲ့သည်
Duty of2ခေါ်ဆိုမှုပုံမှန်နေရာများတွင်ပေမယ့်ဂိမ်းချစ်ပ်သာဖြစ်ပါသည်တစ်ဦးချင်းစီအရာသုံးခုစည်းရုံးလှုံ့ဆော်မှုများ, ပါဝင်သည်။ ဥပမာ, ဗြိတိန်အခနျးမှာကျွန်တော်တစ်ဦးတင့်ကားများ၏ထိန်းချုပ်မှုယူလိမ့်မည်ကို၎င်း, အမေရိကန်ဘက်၏သူရဲကောင်းများနာမည်ကျော် "နေ့: D" အတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းယူပါလိမ့်မယ်။
ကုစားနည်းများနှင့် Rockstar စတူဒီယိုအားဖြင့်ဂိမ်းမက် Payne ၏ပထမဦးဆုံးအစိတ်အပိုင်းနှစ်ခုတစ်ဦးအောင်မြင်မှုများဂိမ်းနှင့်ဂရပ်ဖစ်စေပြီ။ ပစ်ခတ်မှု၏ 3D-မော်ဒယ်များနှင့်စက်ပြင်အချိန်ကိုအဆင့် stratospheric အပေါ်ဖျော်ဖြေခဲ့ကြအဖြစ် 1997 ခုနှစ်တွင်စီမံကိန်း, အံ့သြဖွယ်ကြည့်ရှုကြ၏။
အဆိုပါစီမံကိန်းကိုနေဆဲနှေး Motion နှင့်တွေများလေထု nuarny ဖြစ်လာ chip ကိုချီးကျူးနေသည်
ချစ်ရသူရဲ့သေခြင်းများအတွက်ပြစ်မှုဆိုင်ရာကမ္ဘာကြီးအပေါ်ကလဲ့စားချေဘို့ဂိမ်း၏ဇာတ်ကောင်။ ဤသည် vendetta တစ်ခုချင်းစီကိုသစ်ကိုမစ်ရှင်ထပ်ခါတလဲလဲတစ်သွေးထွက်သံယိုသတ်ဖြတ်မှု, သို့လှည့်။
မာရျနတျမေလ Cry3နတ်ဆိုးတို့၏ငယ်ရွယ်သူရဲကောင်း Dante အလုံးအရင်း၏ရုန်းကန်မှု၏ဇာတ်လမ်းပြောပြသည်။ ဂိမ်းစက်ပြင် DMC ရိုးရှင်းပြီးတောက်ပခဲ့ကြသည်: ကစားသမားအနေဖြင့်ရွေးချယ်ဖို့ရှိပါတယ်, ကိုယ်ပိုင်ချဉ်းကပ်နည်းကိုရှာဖွေခဲ့ချင်းစီ၏လက်နက်နှစ်မျိုးအနည်းငယ် combo တိုက်ခိုက်မှုများနှင့်ရန်သူ motley ထားရှိခဲ့သည်။ မိကျောင်းများ၏စစ်တိုက်အလုံးအရင်း adrenaline ၏ပြီးသား Over-န့်သတ်ချက်အဆင့်ကိုတိုးမြှင့်ခြင်း, လိုက်စားဂီတအောက်မှာရှိကြ၏။
မာရျနတျမေလ Cry32005 ခုနှစ်မှာဖြန့်ချိခြင်းနှင့်ကွန်ပျူတာဂိမ်းသမိုင်းမှာအများဆုံးမှတ်မိတုတ်ဓားတဦးဖြစ်လာခဲ့သည်
Doom32004 ခုနှစ်တွင်ဖြန့်ချိနှင့်၎င်း၏အချိန်များအတွက်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကွန်ပျူတာများပေါ်တွင်အများဆုံးခေတ်မီဆန်းပြားပြီးလှပသေနတ်သမားတဦးရှိ၏။ အတော်များများကကစားသမားနေဆဲစိတ်ရောကိုယ်ပါနေရာအနှံ့ကြောက်မက်ဖွယ်သောမှောင်မိုက်ကိုအစားထိုးပေးသောအားကြီးသောသည့်ပြောင်းလဲနေသောဂိမ်း၏ရှာဖွေရေးအတွက်ဤစီမံကိန်းအားရည်ညွှန်း။
Doom3အိုင်ဒီ Software များကတီထွင်ခြင်းနှင့်ကို Activision ဖြန့်ချိ
Doom အမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှပရိတ်သတ်သင်လက်နက်များသုံးစွဲဖို့ဖြစ်နိုင်ချေမရှိသောမီးအိမ်၏လက်သို့ယူသည့်အခါခံစားရပုံကိုအကူအညီမဲ့အောက်မေ့! ဤအမှု၌မဆိုတန်ပြန်နဂါးသေစေတတ်သောခြိမ်းခြောက်မှုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
1997 ကစားသမားသည်ထောင်ထဲကဦးခေါင်း၏အခန်းကဏ္ဍကိုယူဆများနှင့်၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်နတ်ဆိုးကလူဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ခဲ့သည့်အတွက်အများဆုံးပုံမှန်မဟုတ်သောမဟာဗျူဟာများလွှတ်ပေးရန်မှတ်သား။ မကောင်းသောအအင်ပါယာဦးဆောင်လမ်းပြခြင်းနှင့်မှောင်မိုက်လိုဏ်ဂူ၌သင်တို့၏ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းစုကြီးဖြစ်သောပြန်ဆောက်ဖို့အခွင့်အလမ်းန့်အသတ်အာဏာနှင့်အနက်ရောင်ဟာသငယ်ရွယ်ပရိသတ်တွေကိုဆွဲဆောင်။ အဆိုပါစီမံကိန်းတွင်ပါသေးပါကစီးပေါ်မှာကစားသည်ပူနွေးသောစကားတော်ကိုအောက်မေ့, ဒါပေမယ့်ဖြစ်ချင်တော့ဇာတ်ကားနဲ့လှည့်ဖျား-off ကနေတဆင့်ပြန်လည်ရှင်သန်ရန်မအောင်မြင်ကြိုးစားနေ။
ထောင်ထဲကဂိုးသမား Bullfrog Productions အားဖြင့်ဖွံ့ဖြိုးပြီးအနုပညာနှင့်ဘုရားဂိမ်းပိုင်
အစစ်အမှန်အချိန်မဟာဗျူဟာဂိမ်း Cossacks: 2001 ခုနှစ်တွင်ဥရောပစစ်ပွဲများ, ထိုပဋိပက္ခ၏ရွေးချယ်ရေးနှစ်ဖက်အတွက်ပုံမှန်အမျိုးမျိုး။ ကစားသမားထူးခြားတဲ့ယူနစ်နှင့်စွမ်းရည်ရှိပြီးတစ်ဦးချင်းစီ၏ 16 အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ၏တဦးတည်းမှုအတွက်ဆောင်ရွက်ရန်အခမဲ့ဖြစ်ကြသည်။
Cossacks2ပို. ပင်ပရိတ်သတ်တွေ Renaissance တိုက်ဖျက်စုဆောင်းထားပြီးမဟာဗျူဟာဆက်လက်
အခြေချဖှံ့ဖွိုးတိုးတအချို့သောဆန်းသစ်မကြည့်ပါဘူး: အဆောက်အဦးများနှင့်ထုတ်လုပ်မှုအရင်းအမြစ်များဆောက်လုပ်ရေးကိုအခြား RTS တူပေမယ့်စစ်တပ်အဆောက်အဦးများအဘို့ 300 ကျော်အဆင့်မြှင့်နှင့်သိသိသာသာဂိမ်းမျိုးစုံ။
ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ဒီစီမံကိန်းသည်အမျိုးအစားထဲမှာလက်ရာတစ်ခုသို့မဟုတ်စံပြစဉ်းစားဖူးပေမယ့်လုပ်ဆောင်ချက်၏မတရားမှုကိုနှင့်လွတ်လပ်သူအကြံပြုတစ်ခုကိုအရာအားလုံးထက်နှင့်အတူနှိုင်းယှဉ်ဖို့ခက်ခဲသည်။ ဂိမ်းအနက်ရောင်ဟာသနှင့် amoralschinoy နှင့်ပြည့်စုံသောကြောင့်, 2003 စာတိုက်2မှာဂိမ်းကစားဘို့ဝေးကိုချိုးဖျက်ဖို့အမှန်တကယ်ပျော်စရာလမ်းနှင့်ကိုယ်ကျင့်တရားစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အစီးပွားဖြစ်အကြောင်းကိုမေ့လျော့။
စာတိုက်2ဂိမ်း Inc မှ, ကတ်ကြေးနှင့်အတူကို run ထားတဲ့လွတ်လပ်သောကုမ္ပဏီကတီထွင်ခဲ့သည်
စေ၏သူရဲကောင်းများနှင့်မှော် III ကို, ကစားသမားထောင်ပေါင်းများစွာ၏ရာပေါင်းများစွာတစ်ခုတည်းကုမ္ပဏီနှင့်ကွန်ယက်စနစ်အကြားရွေးချယ်ဖို့ဘာလို့လဲဆိုတော့မှီဝဲတဲ့ဂိမ်းကိုးဆယ်၏အဆုံး၏သင်္ကေတဖြစ်လာခဲ့သည်။ ဤစီမံကိန်းသုည၏ကလပ်အသင်းအားလုံးကိုကွန်ပျူတာပေါ်မှာခဲ့တာ, အခုချစ်ဖွယ်အနုပညာ၏ဤသနေိုငျလက်ရာနှင့်တစ်ဖွဲ့လုံးကစက်မှုလုပ်ငန်း pereprohodyaschimi ပရိသတ်တွေအားဖြင့်အောက်မေ့တော်မူ၏။ သာဒီဂိမ်းထဲမှာသင်ကတနင်္လာနေ့ခစျြဖို့ငါ့အလိုရှိသမျှသောစိတ်နှလုံးနှင့်ကြိုတင်တိုင်းအရေးယူမှတစ်ဆင့်ထင်ဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူနှင့်နက္ခတ်ဗေဒင်ယုံကြည်ပါတယ်။
သတ္တိ၏ဂိမ်းသူရဲကောင်းများနှင့်မှော် III ၏ developer ကုမ္ပဏီကမ္ဘာသစ်ကွန်ပျူတာဖြစ်ပါတယ်
ယခုတိုင်အောင်ကစားကြသည်ဟောင်းဂိမ်း၏ဒုတိယစုဆောင်းခြင်း, နောက်ဆုံးသောနှစ်ပေါင်း hits ကြွယ်ဝပဲ! အဘယ်သူ၏ကလေးဘဝသို့မဟုတ်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်မှန်းချက်ရဲ့နေဆဲသငျသညျအပြေးသလဲ? ဝေမျှမယ်မှတ်ချက်များအတွက်ရွေးချယ်စရာများနှင့်အစဉ်အဆက်တို့သည်အတိတ်၏အကြိုက်ဆုံးဂိမ်းအကြောင်းကိုမမေ့မလြော့ပါ!
ဗီဒီယို Watch: Line Walker -2 မသည . . . အပင (နိုဝင်ဘာလ 2019).